Funny – SoShwe
2 hours ago	Funny 0
အသက် ၅ နှစ်အရွယ် Adrian Zamarripa ဆိုတဲ့ကလေးငယ်ဟာ ၃ ဒေါ်လာကို အိတ်ကပ်ထဲထည့်ပြီး Lamborghini ဝယ်ဖို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အထိ ကားမောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးက အသက် ၅ နှစ်အရွယ်ကလေးလေးက ကားမောင်းတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား? လို့ သံသယဝင်နိုင်ကောင်း ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက် ၅ နှစ်အရွယ်ကလေး ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အထိ Lamborghini ဝယ်ဖို့ ခရီးနှင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ အမှန်ပါဘဲ။ Adrian ဟာ မိဘနှစ်ပါးလုံး အလုပ်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမဖြစ်သူ Sidney Estrada နဲ့ အိမ်မှာနေခဲ့ရပါတယ်။ Sidney က Adrian ကို ထိန်းနေရင်းကနေ …
ကြည့်ရှုသူတိုင်းကို ပြုံးပျော်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကြော်ငြာများ။
1 week ago	Funny 0
၁။ မီးလုံးကြော်ငြာလေးကနေ စကြည့်လိုက်ကြရအောင် . . . ၂။ ဖြည်းဖြည်းရယ်ကြနော် . . . ၃။ ကြော်ငြာမှာတွေ့တဲ့အတိုင်း လုပ်လိုက်လို့ကတော့. . . . ၄။ အမှန်ပဲလေ . . . ၅။ ဘီယာကြော်ငြာတဲ့ဗျာ . . . ၆။ ညဏ်ကောင်းလိုက်တာ . . . ၇။ Durex ရဲ့ Father Day ဆုတောင်းလေး . . . ၈။ ဟုတ်တယ် . . . ကြိုသောက်ထားသင့်တယ် . . . …
ထီပေါက်ပြီးရလာတဲ့ငွေတွေကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ သုံးစွဲချင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပြီးနောက် လူတွေကို အံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့အမျိုးသား။
စာဖတ်သူရဲ့အသိမိတ်ဆွေထဲမှာ ထီပေါက်ဖူးတဲ့လူတွေ ရှိပါသလား? ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ထီထိုးကြတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတာကတော့ အမှန်တရားတစ်ခုပါ။ ထီထိုးသူတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကလည်း ကံကောင်းပြီး ထီပေါက်ရင်ရမယ့်ငွေတွေနဲ့ သူတို့လိုချင်တာလေးတွေဝယ်နိုင်ဖို့ ၊ သူတို့အနာဂါတ်ကို အာမခံပေးမယ့် အလုပ်တွေလုပ်ချင်လို့ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထီပေါက်ခြင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို သေချာပေါက် ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာက ချွေးတစ်စက်မှမကျဘဲ လက်ထဲကို သန်းပေါင်းများစွာသော ငွေတွေရောက်လာတဲ့ ကံကောင်းမှုကို လူအနည်းငယ်ကသာ ရရှိကြတာပါ။ သန်းချီဆုကြေးငွေပမာဏက မြင့်တက်လာနေပြီမို့ လူအများဟာလည်း ထီလက်မှတ် အများအပြား ဝယ်ယူလာကြတာမျိုးတွေ လုပ်လာကြပါတယ်။ ကိုယ့်အသိထဲမှာ ထီပေါက်ဖူးတဲ့ ကံထူးရှင်တွေကတော့ ထီပေါက်ဖို့ အခွင့်အရေး နည်းတယ်ဆိုတာ သိတာတောင် ထီထိုးလိုစိတ် ရှိကြတုန်းပါပဲ။ သထင်းထောက်တစ်ယောက်က Powerball Jackpot …
ရယ်မောဖွယ်ကောင်းတဲ့ စင်ရော်ငှက်နှစ်ကောင်ရဲ့အပြုအမူကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံဆရာမ။
1 week ago	Animals, Funny 0
စင်ရော်ငှက်များသည် တစ်ဖက်သားအပေါ် သူတို့ရဲ့ လှည့်စားနိုင်သည့်အရည်အသွေးများဖြင့် အထူးကျော်ကြားသည့်ငှက်များဖြစ်ပြီး အမွှေးခပ်ကြမ်းကြမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို သဲသောင်ပြင်အတွင်းသို့ ထိုးဆင်းရသည်ကို နှစ်သက်တတ်ကြပါတယ်။ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များရဲ့ သဘာဝတရားကို အမိအရ မှတ်တမ်းတင်လေ့ရှိသည့် ဓာတ်ပုံဆရာမ Jennifer Leigh က California ပြည်နယ်၊ La Jolla ဒေသရှိ ကလေးရေကူးကန်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ရင်းဖြင့် ကမ်းခြေရဲ့ သဲသောင်ပြင်ပေါ်၌ စင်ရော်ငှက်နှစ်ကောင်ဟာ အမျိုးသားအင်္ဂါအတုကို လုယက်ရင်း အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေသည့် ပုံရိပ်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါငှက်နှစ်ကောင်သည် တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် အပြန်အလှန် လှည့်စားတိုက်ခိုက်ရင်း နောက်ဆုံး၌မူ ကျန်တစ်ကောင်က အဆိုပါလိင်အင်္ဂါအတုကို ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါဓာတ်ပုံများနဲ့ ပတ်သက်၍ အွန်လိုင်းပေါ်၌ ဝေဖန်မှုများလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ စင်ရော်ငှက်နှစ်ကောင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး …
လောကနိယာမအတွက် အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်တဲ့ အရပ်ရှည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခ။
2 weeks ago	Funny 0
အရပ်ရှည်တဲ့သူတွေ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဒုက္ခတွေကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်နေရာသွားသွား သူများတွေထက် အရပ်ပိုရှည်နေတာကြောင့် လူအများက ငေးကြည့်တာကို ခံရမယ်။ အခန်းတစ်ခန်းထဲ ဝင်သွားတဲ့အခါမှာလည်း အခန်းတံခါးထက် အရပ်ကရှည်နေတာကြောင့် ခေါင်းလျှိုပြီးဝင်ရမယ်။ အလျင်စလိုပြေးဝင်ရင် မတော်တဆ အခန်းတံခါးနဲ့စောင့်မိပြီး ကြယ်တွေ ၊ လတွေမြင်ရမယ့် အနေအထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်ရှည်တဲ့သူတွေကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဒုက္ခတွေကို အောက်မှာမျှဝေဖော်ပြပေးပါမယ်။ ၁။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ စစ်ဆေးခံဖို့အတွက် ရှေးဦးတိုင်းတာမှုတွေ ပြုလုပ်ရတဲ့အခါ။ ၂။ အရပ် ၆’ ၇”ရှည်တဲ့ Stephen McNeil တစ်ယောက် အမျိုးသမီးသတင်းထောက်နဲ့ အင်တာဗျူးခံရတဲ့အခါ။ ၃။ အရပ် ၆’ ၄” ရှည်သူ အမျိုးသမီးနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုကို အတူတက်ရောက်တဲ့အခါ။ ၄။ …
၁။ ရုတ်တရက်မြင်ကွင်းတစ်ခု။ အိမ်ကိုညဘက်နောက်ကျမှပြန်လာပြီး မိမိကုတင်အစွန်းတစ်ဖက်မှာ ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကို မြင်လိုက်ရရင် အင်မတန်မှသွေးပျက်ချောက်ချားစရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၂။ အိပ်မက်ဆိုးမက်သွားစေနိုင်မယ့်အရာ။ ရော်ဘာလက်အိပ်တွေကို အဝတ်လျှော်စက်ထဲ ထည့်လျှော်ထားချိန်မှာ ရုတ်တရက် ဘေးတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကို သေချာပေါက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်နော်။ ၃။ ဖိနပ်တစ်ရံရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်မြင်ကွင်း။ မိမိစီးလာတဲ့ဖိနပ်ကို အိမ်ပေါက်ဝမှာချွတ်ထားခဲ့ပြီး အခုလိုမျိုး အမှတ်မထင်လှည့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ တုန်လှုပ်သွားမှာသေချာပါတယ်။ ၄။ အမေနဲ့သရဲတစ်ကောင်အလား။ ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပါက တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အမေနဲ့ သရဲတစ်ကောင်တို့ စစ်ခင်းနေပါလားလို့ ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ အဆိုပါအမျိုးသမီးက အဝတ်လျှော်ပြီး လှန်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၅။ တစ်စုံတစ်ယောက်ဝင်အိပ်နေသည့်အလား။ ခေါင်းအုံးနဲ့စောင်တို့ကို သေချာစနစ်တကျနေရာချလိုက်သည့်အခါ ယခုကဲ့သို့မြင်ကွင်းမျိုးကို မြင်တွေ့ခံစားရမှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၆။ အိပ်ရာခင်းကို …
၁။ ဒီပုံကတော့ မိခင်တစ်ယောက်က သူမကလေးကစားရန်အတွက် ဖန်တီးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ ကိုယ်တွင်းအစိတ်အပိုင်းနဲ့တူနေခဲ့ပါတယ်။ ၃။ မိခင်ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် Oven ကြီးတစ်ခုလုံးမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ ကလေးက ရေချိုးခန်းထဲမှာဆော့ကစားနေရင်း မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဒီပစ္စည်းကြီးကို ပိုက်အဖြစ်နဲ့တွေ့သွားခဲ့တာပါပဲ။ ၅။ ဒီမိခင်ကတော့ သူမကလေးရဲ့လူမှုဖူလုံရေးကတ်ကို အဝတ်လျှော်စက်ထဲထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၇။ နေ့လယ်အဆာပြေစားဖို့အတွက် မှိုတက်နေတဲ့အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကို ထည့်ပေးလိုက်တဲ့မိခင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုမကျွေးချင်လည်း တခြားဟာတစ်ခုခုကို ကျွေးပေးဖို့ပါ စာရေးပြီးတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်။ ၈။ Tablet ကို ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်ပြီးမေ့နေတဲ့ မိခင်က ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ပုံထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း Tablet က တစ်စစီကြေမွှသွားပါတယ်။ ၉။ အရုပ်တွေကိုကားပေါ်မှာ ဒါမှမဟုတ် …
လူတိုင်းမြင်တွေ့သင့်သည့် ချစ်စရာခွေးလေးများရဲ့ ပုံရိပ်များ။
3 weeks ago	Animals, Funny 0
၁။ ချစ်စရာမျက်လုံး၊ မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော ခွေးလေးရဲ့ ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သံစဉ်နဲ့လိုက်ပြီး စည်းချက်ညီကနေသော ခွေးလေးရဲ့ ဗီဒီယိုကို Tik Tok ပေါ်၌ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ၃။ သူတို့နှစ်ကောင်ရဲ့ပုံတူပန်းချီကားများဖြင့် ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ သခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအချိန်များကို ဖြတ်သန်းနေသည့် ခွေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ ၅။ ချစ်စရာမြင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာခွေးလေးတို့နှစ်ကောင်ရဲ့ သံယောစဉ်ကို ဖော်ကြူးနေသည့် ဓာတ်ပုံများပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၆။ သခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ ဘောလုံးကစားရန် ပြေးလာရင်း အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်ရသည့် မြွေအန္တရာယ်ကို မဆိုင်းမတွ ရှင်းပစ်လိုက်သည့် ခွေးလေးရဲ့ ဗီဒီယိုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၇။ ရေဖြည့်ထားသည့် ကြွေအိုးကြီးတစ်ခုအတွင်း၌ …
TikTok ဆယ်လီဖြစ်လာသည့် အသက် (၄) နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်။
3 weeks ago	Funny 0
Charlie ဟုအမည်ရသည့် အသက် (၄) နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးသည် TikTok ပေါ်၌ လူသိများကျော်ကြားသည့် ဆယ်လီတစ်ယောက်ဖြစ်လာကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါကလေးမလေးသည် ကျောင်းကပွဲတစ်ခု၌ အကအဖွဲ့နဲ့အတူ စင်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ဖျော်ဖြေရခြင်းဖြစ်ပေမယ့် အနည်းငယ်မျှတောင် လိုက်ပါကခုန်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်နောက် ယခုကဲ့သို့ နာမည်ကြီးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Charlie အနေဖြင့် စင်ပေါ်၌ (၆) မိနစ်ကြာမြင့်သည်အထိ မလှုပ်မယှက် မတ်တပ်ရပ်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Caleb Collier ဟု အမည်ရသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးက “ကျွန်တော့်တူမလေးရဲ့ ကျောင်းကပွဲကိုသွားပြီး ဒီလိုမျိုးု ဒဏ္ဍာရီမြင်ကွင်းတစ်ခုကို မြင်ခဲ့ရတယ်။” ဟု ရေးသားကာ TikTok ပေါ်၌ အဆိုပါဗီဒီယိုကို တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Charlie ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ Tiffany Cosby ကမူ မိမိသမီးလေး …
ကမ္ဘာ့အထူးဆန်းဆုံး ဆေးလိပ်ဖြတ်နည်းကို လက်တွေ့ပြသခဲ့သည့်အမျိုးသား။
4 weeks ago	Funny, LifeStyle 0
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဝါသနာ၊ အမူအကျင့်က အချိန်ကြာလာသည်နဲ့အမျှ ဖြတ်တောက်ရခက်လာလေ့ ရှိပါတယ်။ အချို့သောကိစ္စများက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိခိုက်စေတတ်ပြီး ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များကပဲ အခြားသောသာမန်အမူအကျင့်များထက် ပိုမိုဖြတ်တောက်ရခက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တူရကီနိုင်ငံမှ အမျိုးသားတစ်ဦးကမူ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သည့် ၎င်းရဲ့အမူအကျင့်ကို ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် ထူးထူးဆန်းဆန်းနည်းလမ်းတစ်ခုကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ အီဘရာဟင်မ်ဟု အမည်ရသည့် အဆိုပါအမျိုးသားသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားများကို နည်းနာယူကာ ၎င်းတို့ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည့် ဦးထုပ်အတိုင်း ပေ (၁၃၀) ရှိသည့် ကြေးနန်းကြိုးများကို လှောင်အိမ်သဖွယ်ပြုလုပ်ပြီး ခေါင်းမှာစွတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ရဲ့ဦးထုပ်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျချွတ်နိုင်ပေမယ့် အီဘရာဟင်မ်ကမူ ၎င်းရဲ့ခေါင်းမှာစွတ်ထားသည့် သံဇကာလှောင်အိမ်ကို ချွတ်နိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုရမည့်သော့ကို မိသားစုဝင်များထံ အပ်ထားလိုက်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်တတ်သည့် ၎င်းရဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။ အီဘရာဟင်မ်သည် အသက် …